Custom entwasahlobo kumatilasi usayizi yinkosi Umkhiqizi | Rayson
Memory Foam futhi kumatilasi Kuyaqondakala ngekhono layo nokuguquguquka ukuba wabuka umzimba asekelwe umzimba ukushisa olele sika lushabalale, okubonisa ukuthi ihlinzeka ngezifiso iphuzu impumuzo kungakhathaliseki ubuthongo isitayela - into ejwayelekile okuqhubekayo / Bonnell volute entwasahlobo omatilasi abanakukwazi sifinyelele. I imikhondo nesikhathi umphathi ukuqondanisa umgogodla ukuthi kokubili aqede futhi akunqandi ubuhlungu sciatic.
ubunjalo Memory Foam sika viscoelastic kuyivumela uphendule ingcindezi endaweni kakhulu, okuyinto uhumusha kakhulu ukunyakaza ngabodwa
Njengoba kushiwo ngenhla, sturdiness ka umantilasi inkumbulo Foam lihlanganiswe ngokuqondile kwabantu bayo - ngenkathi 4 lb./cu.ft. ukuthi okungenani kufanele sihlose uma ungafuni isipiliyoni ehle phakathi nonyaka eyinhloko cishe, sincoma uya okungenani 5 lb./cu.ft. uma ungathanda umkhiqizo okuzokwenza isikhathi eside ngempela.
Kuyo yonke le minyaka, Rayson iye ukunikela amakhasimende imikhiqizo eliphezulu futhi esebenza kahle emva-yokuthengisa amasevisi ngenhloso eletha izinzuzo angenamkhawulo ngabo. usayizi yinkosi entwasahlobo kumatilasi Namuhla, Rayson lifaka phezulu njengoba umphakeli professional futhi abanolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungase uthole okwengeziwe mayelana entsha usayizi yethu umkhiqizo entwasahlobo kumatilasi inkosi futhi inkampani yethu ngokuxhumana ngqo us.The izinga ukulawula Rayson luqhutshwa ngqo kusuka esigabeni sokuqala nokuhlonza izindwangu kuya esigabeni izingubo yokugcina esiphelele.
Kuyo yonke le nqubo, QC bethu bamahhotela ngeke uyigade inqubo ngamunye ukuqinisekisa izinga umkhiqizo.
Nge ephelele zokukhiqiza imigqa nabasebenzi abanolwazi, Rayson ingakwazi ukuklama, ukuthuthukisa, ukukhiqiza, ukuhlola yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo.
Kwangathi ngivakashela ifektri yakho?
Yebo, ukwamukela ukuvakashela factory sethu nganoma yisiphi isikhathi, sesiseduze Guangzhou Baiyun sezindiza zamazwe ngamazwe, ke nje kuthatha ihora elilodwa ngemoto, futhi asikwazi ukuhlela imoto ukuba pick up.
Yini izindlela zokukhokha ingabe ukwamukela?
LC at emehlweni / by TT, 30% Deposi nama-70% esele kuphambene amakhophi lokuthumela imibhalo witinin ezingu-7 zokusebenza.